#डायरी Archives - Left Review Online
क. छवी सुवेदी २०७७ जेठ १५ गते बिहीवार
क्वारेन्टाइनमा छु । जिन्दगीमा मैले कोरोना र क्वारेन्टाइन भन्ने नामहरु कहिल्यै सुनेको थिइन । हाम्रो गाउँमा न त कोरोना आउँथ्यो, न त क्वारेन्टाइन नै चाहिन्थ्यो । सानो छँदा दादुरा, ठेउला आएको याद छ । ठूलो हुँदा पनि ज्वरो, रुघाखोकी आदि भोगेको थिएँ । उमेरले जवानीमा टेकेपछि घर छाड्नुपर्ने...बाँकी
#कोरोना भाइरस#क्वारेन्टाइन#छवी सुवेदी#डायरी#परदेशी
एउटा योद्धासँगको डायरी
क. निमानन्द रिजाल २०७५ असार २० गते बुधवार
तपाईं त दुब्लाउनु भएछ । हो, म दुब्लाएको छु स्कुल छोडेँ, कापी च्याँते किताब त आगो लगाइदिएँ त्यो रापले मलार्इ चिसोमा न्यानो दिएको थियो । हात बजार्ने, आरन ताउने, खलाती तान्ने , रापिलो शिक्षा थियो मेरो । यो रापमा सारा चिसा रातहरुलार्इ सेकाइदिइरहेको । आमा नयाँ चोली फेरी...बाँकी
#Nimananda Rijal#Yoddha#एउटा योद्धा#कविता#कविता#डायरी#निमानन्द रिजाल